Tani waa qiimaha lagu beddelayo AirPod Pro haddii khasaaro dhacdo | Wararka IPhone
Tani waa qiimaha lagu beddelayo AirPod Pro haddii khasaaro dhacdo
Waa wax ku dhici kara wax ka yar qaabkan cusub ee AirPods iyo in sameecadda dhagaha ee dhegta ay ku jirto cinjirka ay caadi ahaan ahaan lahayd in la ogaado marka ay dhacaan. Sida iska cad qofkasta wuu qaldami karaa laakiin Xaaladdan oo kale, waxay umuuqataa wax yar oo suurtogal ah inay dhacaan oo aynaan garanaynin oo leh naqshad cusub AirPods Pro.
Arrin kale ayaa ah inay ku dhacaan meel ay marin dhib badani ka jirto oo aan ka soo kaban karin ama ay biyaha ku dhacayaan, in kasta oo ay run tahay taas tani waxay nagu dhici kartaa qalab kasta oo ay ku jiraan taleefannada casriga ah ama sameecad kasta ha ahaato ama ha ahaato AirPods Pro.
Qiimaha rasmiga ah ee Apple, oo kor u kacaya ilaa $ 89 beddelka ama "dayactirka" mid ka mid ah AirPods Pro-ka Mareykanka, wuxuu noqon karaa qiyaastii 100 euro halkan tirinta canshuuraha iyo kuwa kale ... Xaaladda luminta sanduuqa xamuulka qiimuhu waa isku mid, marka waad ogtahay, inaad ka wanaagsan tahay inaadan lumin. Sidan ayaa qiimaha lagu tiriyaa in aanaan haysan AppleCare + taas oo markaa qiimaha uu ku dhacayo $ 29 labada xaaladoodba:
Taas bedelkeeda moodooyinka kahor AirPod-yada cusub Waxay si cad u leeyihiin xoogaa adag "dayactirka" iyo qiimaha beddelka:
Haa, waxaan rajeyneynaa inaadan u baahnayn inaad wajahdo waxkastoo badan sababtoo ah dhibaatada ka dhalan karta iyo markale waxaad la kulmi doontaa kharashka sare ee dhaqaalaha ee luminta wax soo saarka Apple iyo xaaladdan cusub ee AirPods Pro. Sikastaba, I naftayda ku celceli, Qaabkani wuxuu umuuqdaa mid ka dhib badan sidii aan udaadin lahayn adigoon ogeyn, sidaa darteed mabda 'ahaan waa inaysan dhicin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Tani waa qiimaha lagu beddelayo AirPod Pro haddii khasaaro dhacdo
WhatsApp wuxuu xaliyaa cayayaanka muujiyey buufinta ogeysiinta ee wada hadalka aamusan